မနေ့တနေ့ကမှ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူနာ တစ်ယောက် ယနေ့မနက်မှာ သေဆုံး သွား ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒိန်းဒေါင် – XB Media Myanmar
မနေ့တနေ့ကမှ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူနာ တစ်ယောက် ယနေ့မနက်မှာ သေဆုံး သွား ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ပြည်သူချစ်ဟာသအနုပညာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်ခု ကိုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူဖြစ်သလို အောင်မြင်နေတဲ့ ထိပ်တန်း ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တစ် ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြီး ဟာသဇာတ်ကား ပေါင်း များစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ယခုမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဟာသဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ယ နေ့ အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ် ပါတယ်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အားတက်သရောပါဝင်လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်က ယ ခုလို Covid ကာလမှာ များစွာသော အလှူတွေကို ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေတာပါ။
ယနေ့မှာတော့ ဒိန်းဒေါင်က ” မသေခင်တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့လာတွေ့ပေးခဲ့တယ် ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ ထမီ အ သစ်(3)ထည်နဲ့ဆေးဖိုးလဲပေးခဲ့တယ်နော် ကျွန်တော်တာဝန်ကျေတယ်နော် ဒီမနက်6:30 မှာခလေးနှစ်ယောက်ကိုလူ့လောကမှာထားခဲ့ပြီးခင်ဗျားထွက်သွားတယ် တာဝန်? ” ဆိုပြီး မနေ့တ နေ့ ကမှ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ လူနာက သေဆုံးသွားတာဖြစ်လို့ ဝမ်းနည်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်။ ကဲ…ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ရှုစေရန်အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..။
Source & Photo credit – Dain Daung’s FB account
ျပည္သူခ်စ္ဟာသအႏုပညာရွင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒိန္းေဒါင္ကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာေနရာ တစ္ခု ကိုအခိုင္အမာရယူထားႏိုင္သူျဖစ္သလို ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ထိပ္တန္း ဇာတ္ပို႔ သ႐ု ပ္ေ ဆာ င္တစ္ ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ရာေနရာမွာ အေကာင္းဆုံးသ႐ု ပ္ေ ဆာင္ၿပီး ဟာသဇာတ္ကား ေပါင္း မ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဒိန္းေဒါင္ကေတာ့ ယခုမွာလ ည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဟာသဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေစခဲ့တဲ့ ဒိ န္းေဒါင္ကေတာ့ ယ ေန႔ အခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာ ရ ယူ ထားႏိုင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အား တ က္သေရာပါဝင္လုပ္ကိုင္တတ္တဲ့ ဒိန္းေဒါင္က ယ ခုလို Covid ကာလမွာ မ်ားစြာေသာ အလႉေတြ ကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနတာပါ။
ယေန႔မွာေတာ့ ဒိန္းေဒါင္က ” မေသခင္ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုလို႔လာေတြ႕ေပးခဲ့တယ္ ခင္ ဗ်ား လိုခ်င္တဲ့ ထမီ အ သစ္(3)ထည္နဲ႔ေဆးဖိုးလဲေပးခဲ့တယ္ေနာ္ ကြၽန္ေတာ္တာဝ န္ေက်တယ္ေနာ္ ဒီမနက္6:30 မွာခေလးႏွစ္ေယာက္ကိုလူ႔ေလာကမွာ ထားခဲ့ၿပီး ခင္ဗ်ားထြက္သြားတယ္ တာဝန္? ” ဆိုၿပီး မေန႔တ ေန႔ ကမွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ တဲ့ လူနာက ေသဆုံးသြားတာျဖစ္လို႔ ဝမ္းနည္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတ ယ္။ ကဲ…ပရိသ တ္ ႀကီးအတြက္ ဒိန္းေဒါင္ရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ၾကည့္ရႈေစရန္အတြက္ ျပန္လ ည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…..။
ညီအစ်ကို အရင်းတွေဆိုပေမယ့် လုံးဝ တခြားစီ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို ပြော ပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထူးခြား
ဝိုင်ရောင်းနေတာကို ဝိုင်ကလွဲပြီး ဝတ် ထားတဲ့အဝတ်အစားကအစ အတင်း ဝယ် နေတဲ့ ပြေတီဦးအကြောင်း ကို ပြော လာတဲ့ ကျော်ကျော်ဗို